Nadiifinta qandaraasleyaasha gudaha Mareykanka
Nadiifinta qandaraasleyaasha gudaha Mason
Nadiifinta qandaraasleyaasha gudaha Ohio
Waxaan nahay ganacsi maxalli ah oo ku faana shaqadeena! Hadaad jeceshahay guri NADIIF AH laakiin aadan necbahay nadaafadda! Waan ku helnay !! Covid-19 Waxaa loo sharciyeeyay infekshinka iyo wasakheynta jirka! 17 sano oo waayo-aragnimo Xirfad iyo edeb leh u adeegaya MAALINTA WAYN / iyo Maya. Aaggayga...
Waxa daabacay Amy
Adeegga Nadiifinta Burgos
Adeegga Nadiifinta Burgos wuxuu ku takhasusay qaybaha ganacsiga, nadaafadda iyo nadaafadda xafiisyada. Ka adeegida gobolka oo dhan ee Connecticut iyo gobolada ku xeeran waxaan ku faraxsanahay inaan bixinno tayada iyo qiimaha ugu fiican ee baahiyahaaga adeegga nadaafadda. Waxaan ku kalsoonahay inaan ...
arag Nadiifinta qandaraasleyaasha la daabacay 2 years ago